Shirka Afisyooni oo maalintii 2-aad galay (Qodobbo ay madaxda qaar wataan) | Hadalsame Media
Home Wararka Shirka Afisyooni oo maalintii 2-aad galay (Qodobbo ay madaxda qaar wataan)
Shirka Afisyooni oo maalintii 2-aad galay (Qodobbo ay madaxda qaar wataan)
(Muqdisho) 29 Juun 2021 – Waxaa magaalada Muqdisho maalintii 2-aad ka soconaya Shirka Golaha Wada-tashiga Qaranka, kaasoo uu shir guddoominayo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Waxaa sidoo kale shirka fadhiya hoggaamiyeyaasha Maamul-goboleedayada dalka oo uu midkood oo ah MW Hirshabeelle uu uga qayb gelayo aaladda Zoom-ka, iyo sidoo kale duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed (Filish).
Waxaa shirkan oo u badan xog-siin inta badan lagu faaqidayaa wixii ilaa haatan ka hirgalay Heshiiskii 27-kii Maajo Muqdisho lagu saxiixay, waxaa sidoo kale warbixin laga dhegeysanayaa Guddiyada Farsamada ee loo magacaabay agaasinka doorashooyinka.
Sidoo kale, xogaha qaar ayaa tibaaxaya in madaxda qaar ay doonayaan in la dhimo ergada soo xulaysa Xildhibaannada oo awal ahayd 101 balse la doonayo in la dhimo oo laga dhigo 51.
Madaxda Jubaland iyo Hirshabeelle ee Cali Guudlaawe iyo Axmed Madoobe, ayaa iyagana la sheegayaa inay doonayaan in halkii awal looga heshiiyey in maamul kastaahi uu doorashada ku qabto 2 magaalo, haatan lagu soo koobo hal magaalo.
Lama oga waxa ugu dambayn lagu heshiis doono iyo sababta qodobbada qaar loo faragelinayo, balse waqti badani ma harin, waxaana la filayaa in shirka laga soo saaro is afgarad horay loogu riixo doorashooyinka oo uu waqtigii 60-ka maalmood ahaa sii dhamaanayo.
Previous articleMaamulkii ay DF Itoobiya ka dhistay caasimadda Tigraay ee Maqalla oo halkaa ka firxaday
Next articleENGLAND VS GERMANY: Kulamadii xiisaha badnaa ee xalay & kulanka adag ee caawa (Tebintii Xaaji)